एक छ फिगर आय मा तपाइँको मार्ग ब्लगिंग को लागी गोप्य
मङ्गलबार, अप्रिल 8, 2008 शुक्रबार, फेब्रुअरी 12, 2016 Douglas Karr
केहि समय अगाडि मेरो आफ्नै पुस्तक सुरू गरिसकेपछि, मलाई थाहा छ कि ब्लग राख्न र ब्लगिंग र सोशल मीडियाको बारेमा मैले सिकेका सबै कुरालाई एकल, सुसंगत प्रकाशनमा राख्न कत्ति गाह्रो हुन्छ।
यो देखिन्छ प्रोब्लगरको डेरन रोउज यति मात्र गरेको छ, तथापि। मैले डेरनको ब्लगलाई टेक अफ गरिरहेको देखेको छु र तपाईले देख्न सक्ने दृढता र स्पष्टता देख्न सक्नुहुन्छ जुन ड्यारेनले ब्लगरहरूको लागि उत्कृष्ट स्रोतको रूपमा विकसित गरेको छ। Problogger निश्चित रूपमा मेरो फिडहरूको सूचीमा 'पढ्नुपर्दछ' मा छ र यसमा सबै धूमधाम र बढाइको अभाव छ जुत्ता र जॉन चौ (ती केटाहरूलाई धेरै माया, यद्यपि ... म उनीहरूको ब्लगहरू पनि पढ्छु!)।
यहाँ अमेजनबाट पुस्तकको एक सिंहावलोकन छ:
ब्लगिंग धेरैका लागि लोकप्रिय र रमाईलो मनोरञ्जन बन्न पुगेको छ, तर अधिक र अधिक ब्लगर्सहरूले पत्ता लगाइरहेका छन् यो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आम्दानीको उत्कृष्ट स्रोत पनि हुन सक्छ। यद्यपि ब्लग सुरू गर्न बाधा कम छ, विशेषज्ञ मार्गदर्शन बिना यो निराश हुन सजिलो छ जब सफलता अपेक्षाहरू मेल खाँदैन। विश्वका # 1 स्रोतका निर्माताहरू द्वारा लेखिएको जुन ब्लगका साथ पैसा कमाउनको लागि हो, प्रो ब्लगरले पाठकलाई निरपेक्ष शुरुआतबाट पैसा कमाउँदछ वा ब्ल्गिंगको परिणामको रूपमा लिन्छ। अभ्यास दर चरण व्यावहारिक पाठको माध्यमबाट पाठकले एक ब्लग शीर्षक छनौट गर्नेछ, बजार विश्लेषण गर्नेछ, एक ब्लग सेट अप गर्नेछ, यसलाई बढावा दिनेछ र आय कमाउनेछ।
यसमा ड्यारेन र क्रिसलाई बधाई छ नयाँ अध्याय प्रोब्लगरको ईतिहासमा! यो मेरो इच्छा सूचीमा छ!
टैग: पुस्तकड्यारेन रोउसेproblogger
इवेंटब्रिट: घटनाहरू वास्तवमै सजिलो भयो
अप्रिल 8, 2008 मा 10: 41 एएम
डगलस, ProBlogger पुस्तक उल्लेख गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। ड्यारेन र क्रिससँग काम गर्नु साँच्चिकै राम्रो थियो, र अब जब किताबले चीजहरू साँच्चै रोमाञ्चक हुँदै गइरहेको छ।
त्यसोभए, तपाइँ कस्तो प्रकारको पुस्तक लेख्दै हुनुहुन्छ?
जोन विली र संस
अप्रिल 8, 2008 मा 10: 58 एएम
मैले खोज इन्जिन प्लेसमेन्ट, पठनीयता, र रणनीतिको लागि उत्तम अभ्यासहरू प्रयोग गरेर ब्लग कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारे 40 - 50 पृष्ठको पुस्तक पाएको छु। इमानदार हुनको लागि मैले केहि समय मा छोएको छैन!
अप्रिल 8, 2008 मा 4: 02 PM
उल्लेखको लागि धन्यवाद डगलस - यसको कदर गर्नुहोस्।
अप्रिल 10, 2008 मा 8: 26 एएम
तपाईं शर्त लगाउनुहुन्छ, ड्यारेन! तपाईको राम्रो कमाईको सफलताको लागि बधाई छ!